Location: musha » Kutumira » utano » Philippines ndiyo New Ultimate Medical Tourism Destination
Philippines ndiyo New Ultimate Medical Tourism Destination
Slippers uye zvikabudura ndeye yakajairwa kodhi kodhi muHawaii. Semugari mu Aloha Nyika kweanopfuura makore makumi matatu, izvi zvave zvakajairika kwandiri semuGerman-America.
Kupfeka slippers, zvisinei, kunogona kuuya nenjodzi dzisingatarisirwi dzinotyisa, kusanganisira utachiona hwekudya nyama.
Nyaya yangu inotanga muHawaii nemugumisiro unofadza muPhilippine.
Ndinofanira kutenda timu yakanakisa ye World Kufamba neKushanya Kanzuru uye chipatara chepamusoro chandinoziva pasi rose, icho Makati Medical Center muManila, Philippines, nokuda kwokuponesa upenyu hwangu chaizvoizvo.
Magamba angu paMakati Medical Center anoshanda achitungamirwa ne:
Dr. Caoili, Janice Campos, Chirwere chinotapukira
Dr. Victor Gisbert, Chiremba
Ini chokwadi ndinofunga ndingadai ndakave nechimiro chakashata dai ndingadai ndakavimba nanachiremba vangu munzvimbo yangu yekumba yeHawaii. Kuenda kuWTTC Summit muManila kwakabatsira ndisingafungire kuhutano hwangu uye ndinovimba kumhando yehupenyu hwangu hwemangwana nenzira huru- ndosaka.
Uku kwaive kushanya kwekurapa kwakaitwa muPhilippine mukuita
Zvese zvakatanga neChishanu, Kubvumbi 15, 2022. Ndakapfura yangu yechipiri COVID booster ndisati ndabva ku Honolulu kuenda WTTC Summit muManila. Musi weMugovera, Kubvumbi 16, ndakaenda kunotora pedicure iri nyore Ala Moana Shopping Center mhiri kwefurati rangu repamba muHonolulu. Iyo pedicure yakafamba zvakanaka kunze kwekadiki kadiki kakatanga kukura kuita chikara.
Musi weSvondo, April 17, ndakakwira ndege neUnited Airlines kuenda kuGuam, ndikachinja ndege, uye ndakasvika manheru oMuvhuro (April 18) muManila. I transferred to my hotel, the Grand Hyatt.
Ndarara hope chaidzo, ndakamuka mangwanani ndichipindwa nechando, ndiine fivha, uye gumbo dzvuku raiva neutachiona. Ndichifunga kuti izvi zvichazviporesa, ndakaenda kuchitoro chemishonga cheWatson kuti ndiwane aspirin. Izvozvo zvakaderedza tembiricha yangu. Ndakavhenekwa COVID uye yakadzoka isina kunaka. NeChitatu, ndakatamira kuhotera yenzvimbo yeWTTC Summit, iyo Marriott Manila. Ndakapfeka zveWTTC Summit kugamuchira kudya kwemanheru asi ndakafunga kusvetuka mushure mezvose. Kurwadza kwegumbo rangu rekuruboshwe kwakabva kwatora nzvimbo.
Kuseni ndakamhanyira Gerald Lawless ndirimurift ndokumuudza nezvegumbo rangu. Akandikurudzira kuti ndiende kunoongororwa kuhofisi yezvokurapa muhotera. Hofisi yekurapa yaitungamirwa nePhilippine Coast Guard.
Ndakaenda kuhofisi, uye zvakatora maawa maviri ekundinyengetedza nekukurukura nezvazvo ndisati ndafunga kuti ndinotariswa gumbo kuchipatara. Chiremba akadaidza chiitiko cheWTTC chakadana Coast Guard amburenzi, uye takatyaira kuenda kukamuri rekukurumidzira kuMakati Medical Center kuManila.
Kubva ipapo, zvese zvakafamba nekukurumidza. Ndakaiswa mukamuri yekuzvimiririra kuti ndimirire mhedzisiro yePCR COVID bvunzo. 2 hours dzese imwe test yakaitwa pandiri. Izvi zvakauya pamwechete nebasa rakakura reropa, kupfura kwetetanus, uye kuiswa pamadosi makuru emishonga inorwisa mabhakitiriya kuburikidza neIV.
Sezvineiwo bvunzo dzangu dzePCR dzakadzoka dzisina kunaka pazuva repiri, uye ndakapihwa sarudzo yemhando dzemakamuri mashanu muchipatara. Ndakasarudza kamuri hombe repachivande. Rakanga rakakura, rakagadzirwa zvakanaka, uye rakaita sekamuri repahotera pane kamuri rechipatara.
Zvichakadaro, zvikwata zvitatu zvakazvimirira zvevanachiremba zvakaita bvunzo dzese dzaigona. Kubva pa Ultrasound kusvika pachipfuva x-rays, ropa nechituru basa - kuongororwa kuzere kwandati ndamboita.
Mhedzisiro: Ndakaonekwa kuti ndine bhakitiriya rinodya nyama mugumbo rangu rekuruboshwe - mamiriro ane ngozi uye asingawanzoitiki. Chikonzero chingangove chiri kuchekwa kudiki kwandakawana kubva pa pedicure yangu muHonolulu.
Kuita kuti kuwedzere kunakidza, magwamba maviri eropa akaonekwa pakuitwa ultrasound pagumbo rimwe chete, zvichinditadzisa kana kufunga nezvekukwira ndege kuenda kumba. Ndakaiswa mushonga wekuonda ropa.
Mhedzisiro yebvunzo idzi dzese yakandipa mufananidzo wakakwana wehutano hwangu. Chiremba wemwoyo akachinja cocktail yeBP yandanga ndichitora kwemakore, uye BP yangu haina kumbobvira yaita zvakanaka kudaro.
Vanamukoti vakava shamwari dzangu dzepamoyo. Vashandi vehutano vekuPhilippine vanozivikanwa pasi rose kuti vashumire nechido. Ndakademba kuti ndakarangarira zita ra nurse uya akatsvaga charger cable yephone yangu akandiunzira achisekerera.
Sevhisi yemhando yepamusoro netsitsi ndiyo yakamisirwa neMapati Medical Center pachinangwa chayo- uye kiriniki iri kuendesa mberi.
"Isu tinoisa mwoyo yedu muzvese zvatinoita - kurarama hunhu hwedu nekuita izvo zvakafanira hutano nekuchengetedzeka kwevarwere, kugara zvakanaka kwevatinoshanda navo, uye kunaka kukuru kweMMC," iri muchirevo chechinangwa chechipatara. website.
"Makati Medical Center yakagamuchira nekuzvininipisa mibairo yeGawad Bayaning Kalusugan kubva kumabhizinesi enyika nevatungamiriri vehutano. Kuzivikanwa seizvi kunotibvumira kupemberera nyaya dzevarwi vedu vehutano vakashinga vanoramba vachiisa hupenyu hwavo panjodzi kuti vaponese vamwe. "
Chiremba wangu mukuru, nyanzvi yezvirwere zvinotapukira, nguva pfupi yadarika akahwina mubairo uyu.
Makati Medical Center yakavambwa nevanozivikanwa vanachiremba vePhilippines uye mabhizinesi muna 1969.
Nyaya yacho yakatanga mukutanga kwema1960 apo Obstetrician-Gynecologist Constantino P. Manahan, MD, pamwe chete nachiremba anovhiya Jose Y. Fores, MD, uye chiremba wemwoyo Mariano M. Alimurung, MD, vakasarudza kugadzira nzvimbo yekurapa yepasi rose muMakati.
Panguva iyoyo, Makati yakanga ichangotanga kusimuka senzvimbo yekugara neyekutengesa. Iyo Ayala conglomerate yakanga ichiri kuita nhanho dzekutanga dzehurongwa hwayo hwekushandura sabhubhu yeManila kuita dunhu rebhizimusi renyika. Hurongwa uhu hwaida chipatara chemazuva ano kuti chishandire nharaunda.
Kuti vawane mari yokuvaka, vavambi vakatsvaka vanachiremba nedzimwe nyanzvi dzakagoverana chishuvo chavo. Vakatumira mumiririri, Atty. Artemio Delfino, kuenda kuUnited States kunotsvaga vamwe vanoisa mari.
Musi wa31 Chivabvu 1969, iyo Makati Medical Center yakavhura zviri pamutemo mikova yayo kune veruzhinji. Kune vavambi vayo, yakaratidza kuzadzikiswa kwechiroto uye kupera kwemakore ekushanda nesimba uye kuzvipira kupa hutano hwepasi rose kune vePhilippines.
Musi waMay 31, 2019, Makati Medical Center yakapemberera zuva rayo regoridhe. Nharaunda yeMakati Med yakarangarira mabasa anokosha emadzibaba ekutanga kune nhaka yechipatara. Bhuku retafura yekofi rine musoro unoti "Ginintuan" (Goridhe) rakaparurwa kuti rinyore nyaya nenhaka yesangano iri mukati memakore makumi mashanu ekushandira maPhilippines nenharaunda yepasirese.
KuMakati Med, Malasakit yakanyorwa mune yayo Quality Policy: "Isu tinoisa moyo yedu mune zvese zvatinoita - kurarama hunhu hwedu nekuita izvo zvakafanira hutano nekuchengetedzeka kwevarwere, kugara zvakanaka kwevatinoshanda navo, uye kunaka kukuru. weMMC.”
Kupa ane hunyanzvi, akakodzera, akachengeteka, uye anoteerera ehutano masevhisi izvo zvinoguma nemhedzisiro yemurwere uye yepamusoro-soro yekugutsikana pakati pevarwere nevanoshanda navo.
Kuratidzira nhungamiro dzakanaka, dzetsika, uye dzetsika pabasa; kusambokanganisa zita uye mipimo yetsika yechipatara.
Kutsigira bumbiro remafambiro echipatara uye mipimo yetsika yebasa rako; zvichiramba zvichiratidza kugona mukuita basa remunhu.
Kuratidza kuva nehanya kwechokwadi uye tsitsi kuburikidza nemashoko nezviito zvinotungamirira kuhutano hwakanaka hwevarwere nevanoshanda navo.
Kudyidzana zvine hushamwari uye neruremekedzo nechikwata kusvika kune chimwe chinangwa.
Ndakasunungurwa mushure mehusiku 5 uye ndakadzokera kuMarriott Hotel Manila. Mumba mangu makanga musina kumbobatika, uye ndainzwa kuda kuuya kumba.
Ndakatorwa naSharlene Batin kubva kuPhilippine Department of Tourism, uye Verna Covar Buensuceso, Mutevedzeri Munyori wedhipatimendi racho.
Maribel Rodriguez, Senior VP yeWTTC ainditarisa mazuva ese.
Chiitiko ichi chakasimbisa kuti kushanya kune chokuita noushamwari, ukama hwevanhu, uye rugare.
Tourism inopfuura bhizinesi chete, ibhizinesi rine mweya.
Ndiri kupora manje pa Hyatt Regency Manila, Guta reZviroto, rine pepa refu remirairo nemishonga.
Shamwari dzangu itsva kubva kuPhilippine Tourism Board dzakanditora kuenda neni pakuvhurwa kweManila Coffee Festival nezuro manheru - mafaro zvakanyanya, uye chero munhu anondiziva anonzwisisa kuti ndinoda kofi.
Juergen Steinmetz & Sharlene Batin, Philippine Dhipatimendi reKushanya
Iva nekirasi yekutanga ine hutano hunonakidza kune shoma muPhilippine!
"Chakavanzika kuburitswa uye mukugadzira kubuda uye kuenda kuhutachiona", Juergen Steinmetz akadaro. "Philippine ichava nzvimbo yekutanga yekushanya kwekurapa. Zvese zvinongedzo zviri pano. Vanachiremba vepamusoro-soro pasi rose uye zvivakwa, vanamukoti vanochengeta mwero wekutarisirwa kwemhando yepamusoro pasirese, uye nyika yakanaka, mahombekombe anoshamisa, chikafu chakanaka, uye maguta anonakidza. "
Mari yacho yaive yakawanda sei?
Ichi ndicho chikamu chisingadaviriki. Kunyange zvichidhura $3000.00 kungoona mukati memukamuri yekukurumidzira yechipatara cheUS, mari yacho yese inosanganisira bvunzo dzese, mubhadharo wachiremba, kamuri yechipatara imwe yemaoresa yehusiku 4, imba yekuzviparadzanisa nevamwe, imba yekukurumidzira, mishonga yese, uye rubatsiro rwepamba: $5000.00
UWA Inopa Kupfuura US$825,000 kuMurchison Falls Park Communities
Marion Primeau anoti:
Kubvumbi 30, 2022 pa03: 47
Ndakanakidzwa chaizvo neChinyorwa cheMedical ndinokutendai nekugovana nyaya uye ndinofara kuti wapora zvakare.
Nanny wemwanakomana wangu aibvawo kuPhilippines. Uye ndinorangarira mushure memakore ese aya kuti akange akazvipira uye akararamira Mufaro wemwanakomana wangu zuva nezuva kusvika atisiya paakatanga chikoro. Ndichiri kusuwa shamwari yangu nananny wemwanakomana wangu kuti ndinzwisise kuzvitsaurira kwawakaitirwa zvakanaka.
Uye ini ndinonakidzwa nezvinyorwa saka iva neiyo toast kune hutano hwako.